Vashandi vehurumende vanoti vari kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekuti chikamu chevashandi vashoma shoma vaende kumabasa munguva ino yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Mumwe mushandi wehurumende angoda kuzivikanwa nekuti Zhou ati danho ratorwa iri rinochengetedza hutano hwevashandi sezvo vanga vave kuungana kumabasa pamwe nekufamba mumabhazi vakamanikidzana.
Munyori mukuru weApex Council, VaDavid Dzatsunga. vanoti vari kufara nedanho rakatorwa nehurumende vachiti richabatsirawo kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19 muvashandi vehurumende.
Asiwo VaDzatsunga vanoti zvakakosha kuti hurumende ichengetedzewo vashandi vashoma vacho vari kuenda kumabasa kusanganisira kuona kuti vapiwa zvekufambisa pamwe nezvipfeko zvekuvadzivirira kuchirwere cheCovid-19 apo vanenge vari vari pabasa, kana pavanenge vachienda kubasa.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, VaPeter Mutasa, vanotiwo sangano ravo ranga riri kutambudzika zvakanyanya sezvo vashandi vari kuenda kumabasa kusanganisira vehurumende panguva iyi nyika iri paLockdown.
VaMutasa vanoti vashandi vazhinji vanga vasingapiwi zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19. VaMutasa vanoti danho rakatorwa nehurumende iri rakakosha zvikuru.
Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nehurumende marimwe zuro ichiti vashandi vayo vanosvika zvikamu gumi kubva muzana ndivo chete vachangevari kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19.
Zvichakadaro, mumagwaro akabudiswa nevakasanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaJenfan Muswere, rinoti hurumende haina kurambidza kufambiswa kwezvitunha zveCovid-19 kuenda kwavanenge vachinovigwa vakati chavanoda chete kuti vafirwa vashande nebazi rezvehutano.
Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kudzidzisa vakuru vemachechi mabatiro avanofanirwa kuita ndufusenzira yekuvadzivirira kuti vanhu vasabate chirwere cheCovid-19.
Chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichiuraya vanhu pamwe nekubata vanhu vakawanda muZimbabwe nepasi rose.